Iingcebiso ekubhaliseni i-Application Patent Application
Yintoni eya kwiSicelo sePalent Abstract?
I-abstract iyinxalenye yesicelo esibhaliweyo se-patent. Isishwankathelo esifutshane somsebenzi wakho, akukho mhlathi, kwaye sibonakala ekuqaleni kwesicelo. Cinga nje ngenguqu ekhutshweyo ye patent yakho apho ungakwazi ukuyiqonda-okanye uphume kwaye ugxilise kuyo-ingundoqo yendalo yakho.
Nantsi imigaqo eyisiseko ye-Patent ye-United States kunye ne-Ofisi ye-Trademark Office, uMthetho we-MPEP 608.01 (b), uMgaqo-nkqubo wokuBhengeza:
Ubume obuncinane bokubhengezwa kwezobugcisa kwiinkcukacha kufuneka kuqalwe kwiphepha elithile, ngokufanelekileyo ngokulandela amabango, phantsi kwesihloko esithi "Abstract" okanye "Abstract of the Disclosure." Isiqulatho kwisicelo esibhalwe ngaphantsi kwe-35 USC 111 singadluli kumazwi angama-150 ubude. Injongo yesibonakaliso kukunceda i-United States Patent ne-Trademark Office kunye noluntu ngokubanzi ngokukhawuleza ukuba zihlolisise ngokukhawuleza ukuba zihlolwe ngokunyanisekileyo ubunjani kunye nesigcaziso sokuchazwa kobugcisa.
Kutheni Kubalulekile Ukuba Ungabonakali?
Izibhengezo zisetyenziselwa ngokubanzi ukukhangela amalungelo omenzi. Zifanele zibhaliswe ngendlela eyenza ukuba into eyenziwe ngokulula iqondwe ngumntu onemvelaphi endle. Umfundi makakwazi ukukhawuleza ukufumana ingqalelo kwimeko yemveliso ukuze anqume ukuba ufuna ukufunda yonke isicelo sephepha lobunikazi.
Okucacileyo kuchaza indlela oyenzayo. Uthi ungayisebenzisa njani, kodwa ayixubusha ububanzi bamabango akho, zezizathu ezisemthethweni ukuba kungani iqondo lakho lifanele likhuselwe li-patent likhuselekile, libonelele ngekhuselo lomthetho elivimbela ukuba lingabanjiswa ngabanye.
Ukubhala Ubomi bakho
Nika iphepha lisihloko, njenge "Abstract" okanye "Abstract of the Specification" ukuba usebenzisa isicelo se-Office Intellectual Property Office. Sebenzisa "Isiqulatho seNgcaciso ukuba usebenza kwi-Patent yase-United States kunye ne-Ofisi yoThengiso.
Cacisa ukuba uyilophi kwaye uxelele umfundi ukuba yintoni eya kusetyenziswa.
Chaza izinto eziphambili zendalo yakho kunye nendlela asebenza ngayo. Musa ukubhekisela kumabango, imidwebo okanye ezinye izinto ezifakiwe kwisicelo sakho. I-abstract yakho ihloselwe ukuba ifundwe yedwa, ngoko umfundi wakho akayi kuqonda naziphi na izikhokelo ozenzayo kwezinye iindawo zesicelo sakho.
Ubume bakho bube ngamazwi angama-150 okanye ngaphantsi. Kungathatha ubuncinci bezame ukulinganisa isishwankathelo sakho kule ndawo esinqununu. Yifunde ngokuphindaphindiweyo amaxesha ambalwa ukuphelisa amagama angafunekiyo kunye nejeggon. Zama ukuphepha ukukhupha amanqaku afana ne "a," "a" okanye "a" kuba oku kungenza kube nzima ukufunda.
Le ngcaciso ivela kwi-Canadian Intellectual Property Office okanye i-CIPO. Iingcebiso nazo ziya kuba luncedo kwizicelo ze-patent kwi-USPTO okanye kwi-World Intellectual Property Organization.
Isikhokelo soMqali wokuQala iiPatents
Amanyathelo okuba ngummeli we-Patent
Isicwangciso seSifundo seSifundo se-ESL
Ngaba Ngaba Ndingaba Ngumqeqeshi Oqinisekisiweyo we-Microsoft (MCP)?
"Rudolph I-Red-Nosed Reindeer" Iingoma zeKrisimesi kwiJapan
Buza imibuzo kwiKlasi yesiNgesi ukukunceda ufunde